တိုကျိုမြို့အနီးရှိ စီရင်စု ၃ ခုတွင် COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာရန် တောင်းဆိုမည် - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှိ ရှင်ဂျူကူဘူတာရုံတွင် ခရီးသည်အနည်းငယ်သာရှိနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တိုကျို၊ ဇူလိုင် ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မကြာသေးမီက COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက် မြင့်တက်လာပြီးနောက် COVID-19 အရေးပေါ်အခြေအနေ ဒေသများအဖြစ် ထည့်သွင်းရန် ဂျပန်နိုင်ငံ ဗဟိုအစိုးရအား တိုကျိုမြို့အနီးရှိ စီရင်စု ၃ ခုက ပူးတွဲတောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ချီဘာစီရင်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Toshihito Kumagai ၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ ဒေသတွင်း မီဒီယာက ဇူလိုင် ၂၉ ရက်၌ သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဗိုင်းရပ်စ် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ “အကျပ်အတည်းဖြစ်လာမှာကို လေးလေးနက်နက် သတိပြုခံစားမိကြောင်း” Kumagai က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ချီဘာ၊ ကန်နာဂါဝါ နှင့် ဆာအီတာမာ စီရင်စုများမှ တောင်းဆိုသည်နှင့် လျင်လျင်မြန်မြန် ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် တုံ့ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း COVID-19 တုံ့ပြန်ရေး တာဝန်ခံဝန်ကြီး Yasutoshi Nishimura က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နေ့စဉ် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု စုစုပေါင်းမှာ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် ၉,၅၈၃ ဦးဖြင့် စံချိန်တင်ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ဩဂုတ် ၂၂ ရက်အထိ အရေးပေါ်အခြေအနေအောက်တွင် ထည့်သွင်းထားသော အိုလံပစ်ပွဲ လက်ခံကျင်းပသည့် တိုကျိုမြို့သည် ရောဂါကူးစက်မှု ၃,၁၇၇ ခုဖြင့် ကူးစက်မှုမြင့်တက်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိသည်။ အနီးဝန်းကျင်ရှိ စီရင်စု ၃ ခုတွင်လည်း နေ့စဉ်ရောဂါကူးစက်မှုအရေအတွက် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စီရင်စု ၃ ခုအား အရေးပေါ် အခြေအနေထက် စီပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ကန့်သတ်ချက်အနည်းငယ်ဖြင့် လက်ရှိတွင် တစ်ဝက်တစ်ပျက် အရေးပေါ်အခြေအနေအောက်တွင် ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အပေါ် ဖိအားမြင့်တက်လာခြင်းအကြောင်း သတိပေးလျက် နိုင်ငံသားများအား ခိုင်မာသောသတင်းစကားပြောကြားရန် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်က လွှတ်တော်ကြားနာမှုတွင် အစိုးရအား တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း COVID-19 ဆိုင်ရာ အစိုးရဆပ်ကော်မတီကို ဦးဆောင်သည့် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Shigeru Omi က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် အကျပ်အတည်းဖြစ်လာမှာကို လေးလေးနက်နက် သတိပြုခံစားမိပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်မှုက လက်ရှိအဆင့်အောက်ရောက်စေနိုင်မယ့် အကြောင်းတွေအများကြီး မရှိပါဘူး။ အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်က ဒီအကျပ်အတည်းကို ပြည်သူတွေက သတိမပြုမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
“အစိုးရအနေနဲ့ ဒီအချိန်ကိုက်ကို လွဲချော်ခြင်းမရှိဘဲ ပိုမိုရှင်းလင်းပြီး ခိုင်မာတဲ့ သတင်းစကားကို ပေးပို့စေချင်ပါတယ်” ဟု Omi က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
3 prefectures near Tokyo to ask for declaration of emergency state over COVID-19
Source: Xinhua| 2021-07-29 16:04:32|Editor: huaxia
TOKYO, July 29 (Xinhua) — Three prefectures near Tokyo will jointly request the Japanese central government to put them into regions under the COVID-19 emergency state followingarecent increase in the number of COVID-19 cases, according to Chiba Governor Toshihito Kumagai, local media reported Thursday.
Kumagai expressed “a strong sense of crisis” over the rapid spread of the virus atapress conference.
Japan’s daily COVID-19 cases in total struckarecord number of 9,583 on Wednesday, and the Olympic host city Tokyo, which is already under an emergency state until Aug. 22, has faced surging cases witharecord high of 3,177 infections registered. The three neighboring prefectures also reported record single-day highs.
Shigeru Omi, an infectious disease expert who leads the government subcommittee on the COVID-19, urged the government inaparliamentary hearing Thursday to give outastrong message to citizens, warning about the rising stress on the health care system.
“I haveastrong sense of crisis. There are not many factors that will lower the current level of infections,” said Shigeru Omi, an infectious disease expert who leads the government subcommittee on the COVID-19. He also said the “greatest danger is in the fact that the general public does not shareasense of crisis.”
“I want the government to send outamessage that is clearer and stronger than ever without missing this timing,” Omi said. Enditem
Fewer passengers are seen at the big station Shinjuku in Tokyo, Japan, April 7, 2020. Japanese Prime Minister Shinzo Abe on Tuesday declaredamonth-long state of emergency for seven prefectures in an effort to curb the COVID-19 outbreak. Apart from Tokyo and Osaka, the state of emergency also covers Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo and Fukuoka. (Xinhua/Du Xiaoyi)